FaceTime-adịghị arụ ọrụ na iPhone? Nke a bụ ihe mere & ndozi! - Iphone
esi enweta ụlọ ahịa ngwa na iphone
bọtịnụ ụlọ ipad anaghị arụ ọrụ
kedu ihe mere na iphone m anaghị ebudata ngwa
FaceTime-adịghị arụ ọrụ na iPhone? Nke a bụ ihe mere & ndozi!
FaceTime bụ nnukwu ụzọ iji jikọta ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị. Ma gịnị na-eme mgbe FaceTime anaghị arụ ọrụ otu o kwesịrị? N'isiokwu a, m ga-akọwa gịnị kpatara FaceTime anaghị arụ ọrụ na iPhone, iPad, na iPod gị na esi edozi FaceTime mgbe ọ na-enye gị nsogbu.
Iji chọta gị ngwọta, dị nnọọ anya n'ihi na ọnọdụ gị n'okpuru, na ị ga-enwe ike chepụta otú iji nweta gị FaceTime-arụ ọrụ ọzọ. Jide n'aka ịgụ ihe ndị bụ isi tupu ịmalite.
FaceTime: Ihe Ndị Bụ Isi
FaceTime bụ ngwa nkata vidiyo nke Apple, ọ na-arụ ọrụ naanị n'etiti ngwaọrụ Apple. Ọ bụrụ na ị nwere ekwentị gam akporo, PC, ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla na-abụghị ngwaahịa Apple, ị gaghị enwe ike iji FaceTime.
Ọ bụrụ na ị na-anwa isoro onye na-enweghị Apple ngwaọrụ (dị ka iPhone ma ọ bụ laptọọpụ Mac) nkwukọrịta, yabụ na ị gaghị enwe ike ịgwa onye ahụ okwu site na FaceTime.
juul ebubo mana ọ naghị akụ
FaceTime dị mfe iji mgbe ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Tupu anyị agaa, ka anyị gafee otu esi eji ya, naanị ijide n'aka na ị na-eme ihe n'ụzọ ziri ezi.
Olee Otú M Jiri FaceTime On My iPhone?
Nke mbu, gakwuru nke gi Ndi ana-akpo ngwa na pịa ya .
Ozugbo ị banyere n'ime ngwa ahụ, pịa ma ọ bụ pịa aha onye ị chọrọ ịkpọ . Nke a ga - eme ka ị banye na ntinye onye ahụ na Ndi ana-akpo. Should ga-ahụ nhọrọ nhọrọ FaceTime n'okpuru aha onye ahụ.
Pịa ma ọ bụ pịa na FaceTime .
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkpọ naanị ọnụnụ, pịa ma ọ bụ pịa na bọtịnụ Oku. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji vidiyo, pịa ma ọ bụ pịa na bọtịnụ oku vidiyo .
Oge FaceTime Na-arụ Ọrụ na iPhone, iPad, iPod, ma ọ bụ Mac?
Azịza ya bụ 'ee' niile anọ, na ụfọdụ ezi uche ókè. Ọ ga-arụ ọrụ na Mac nwere OS X arụnyere ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ngwaọrụ ndị a (ma ọ bụ ụdị ndị ọzọ): iPhone 4, ọgbọ nke anọ iPod Touch, na iPad 2. Ọ bụrụ na ị nwere ngwaọrụ okenye, mgbe ahụ ị gaghị enwe ike -eme ma ọ bụ na-anata FaceTime oku.
Etu esi edozi nsogbu na FaceTime na iPhone, iPad na iPod
Jide n'aka na ị banyere na Apple ID gị
Iji jiri FaceTime, i nwere na-banye n'ime gị Apple ID, na otú onye ị chọrọ ịkpọtụrụ. Ka anyị malite site n'ịhụ na ị banyere na Apple ID gị.
Gaa na Ntọala -> FaceTime ma hụ na agbanwuru mgba ọkụ n’elu elu ihuenyo dị n’akụkụ FaceTime. Ọ bụrụ na mgba ọkụ adịghị, kpatụ ya iji gbanye FaceTime. N'okpuru, ị kwesịrị ị na-ahụ Apple ID edepụtara NJ gị, yana ekwentị gị na email n'okpuru ya.
Ọ bụrụ na ị banye, nnukwu! Ọ bụrụ na ọ bụghị, wee banye wee nwaa oku ahụ ọzọ. Ọ bụrụ na oku na-arụ ọrụ, mgbe ahụ ị dị mma ịga. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, nwaa nrụpụta ngwaọrụ, nke nwere ike idozi nsogbu na njikọ nke onyinye sọftụwia dịka FaceTime.
Ajụjụ: Oge FaceTime anaghị arụ ọrụ na onye ọ bụla ma ọ bụ naanị otu onye?
Nke a bụ iwu na-enye aka: Ọ bụrụ na FaceTime anaghị arụ ọrụ na onye ọ bụla, ọ nwere ike bụrụ nsogbu na iPhone gị. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ naanị otu onye, ​​ọ nwere ike bụrụ nsogbu na iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod nke onye ọzọ.
Kedu ihe kpatara na anaghị eji FaceTime arụ ọrụ naanị otu onye?
Onye nke ọzọ nwere ike ọ gaghị enwe ihu FaceTime, ma ọ bụ enwere ike ịnwe nsogbu ngwanrọ na iPhone ha, ma ọ bụ na netwọkụ ha na-anwa ijikọ. Ọ bụrụ na ijighi n’aka, gbalịa isoro onye ọzọ kpọọ FaceTime. Ọ bụrụ na oku ahụ gafere, ịmara na iPhone gị dị mma - ọ bụ onye ọzọ chọrọ ka ị na-agụ isiokwu a.
otu esi egbochi nọmba m na iphone 5
3. Are na-anwa ịkpọtụrụ onye na-enweghị ọrụ?
Ọbụlagodi ma gị ma onye ị na-achọ ịkpọtụrụ nwere akaụntụ FaceTime, nke ahụ nwere ike ọ gaghị abụcha akụkọ niile. Apple enweghị ọrụ FaceTime na mpaghara niile. Ebe nrụọrụ weebụ a nwere ike inyere gị aka ịchọpụta nke mba na ndị na-ebu ụgbọ na-eme ma anaghị akwado FaceTime . O di nwute, Ọ bụrụ na ị na-anwa iji FaceTime na mpaghara na-akwadoghị, ọ nweghị ihe ị ga - eme iji rụọ ọrụ.
4. A Firewall Ma ọ bụ Security Software Inweta Na Wayzọ?
Ọ bụrụ na ị nwere firewall ma ọ bụ ụdị nchebe ọzọ nke ịntanetị na ebe, mgbe ahụ, ọ nwere ike igbochi ọdụ ụgbọ mmiri na-egbochi FaceTime ịrụ ọrụ. Nwere ike ịlele ndepụta nke ọdụ ụgbọ mmiri kwesịrị imeghe maka FaceTime iji rụọ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ Apple. Tozọ iji gbanyụọ ngwanrọ nche dịgasị iche iche, yabụ ị ga-aga na ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta ngwanrọ maka enyemaka na nkọwapụta.
Nchọpụta nsogbu Ngwaọrụ FaceTime site na Ngwaọrụ
Ọ bụrụ na ị ka na-enwe nsogbu na FaceTime mgbe ị nwesịrị mmezi ndị dị n'elu, chọta ngwaọrụ gị n'okpuru ma anyị ga-eme ka ị gaa ụfọdụ mmezi ndị ọzọ ị nwere ike ịnwale. Ka anyị bido!
iphone m na -akwụsị na wifi
Mgbe ị na-eji FaceTime na gị iPhone, ọ na-achọ ka ị banye na Apple ID na ngwaọrụ ndị ọzọ, ma ị ga-enwerịrị atụmatụ data cellular. Imirikiti ndị na-ahụ maka ikuku chọrọ atụmatụ data mgbe ịzụrụ ama ọ bụla, yabụ na ị nwere otu.
Ọ bụrụ na ịchọghị iji atụmatụ data cellular gị, ị nọghị na mpaghara mkpuchi maka atụmatụ data gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ọrụ gị, mgbe ahụ ị ga-achọ ijikọ na Wi-Fi. Otu ụzọ iji lelee bụ ile anya n'akụkụ elu ihuenyo gị. Will ga-ahukwa akara ngosi Wi-Fi ma obu okwu dika 3G / 4G ma obu LTE. Y’oburu n’inwe akara ike ike, FaceTime enweghi ike ijikọ.
Lelee ederede ọzọ anyị ma ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ijikọ iPhone na Wi-Fi .
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ijikọ na withntanetị na iPhone gị mgbe ị na-anọghị na Wi-Fi na gị dị na-akwụ ụgwọ maka atụmatụ data, ị ga-achọ ịkpọtụrụ onye na-ahụ maka ekwentị gị iji jide n'aka na enweghị ọrụ ọrụ ma ọ bụ nsogbu na ụgwọ gị.
Otu ọzọ ngwa ngwa fix na mgbe ụfọdụ na-arụ ọrụ na iPhones mgbe FaceTime na-adịghị arụ ọrụ bụ na-atụgharị gị iPhone niile nke ụzọ na mgbe azụ. Wayzọ iji gbanyụọ iPhone gị dabere na ụdị nke ị nwere:
iPhone 8 na ndị okenye : Pịa ma jide bọtịnụ ike gị iPhone ruo mgbe 'slide ka ike gbanyụọ' pụtara. Swipe ike ngosi aka ekpe n'aka ekpe ka mechie iPhone gi. Pịa ma jide bọtịnụ ike ọzọ iji gbanwee ya.
iPhone X na nke ohuru : Pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ iPhone gị na ma bọtịnụ olu ruo mgbe 'slide ka ike gbanyụọ' pụtara. Mgbe ahụ, swipe akara ngosi ike aka ekpe gaa n'aka nri gafee ihuenyo. Pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ iji gbanye iPhone gị ọzọ.
Ọ bụrụ na FaceTime anaghị arụ ọrụ na iPod gị, gbaa mbọ hụ n’ịnye Apple ID gị. Ga-achọkwa ijide n'aka na ị nọ na ntanetị nke netwọk Wi-Fi, na nke ọma na mpaghara mgbaàmà siri ike. Ọ bụrụ na ejikọtaghị gị na Wi-Fi, mgbe ahụ ị gaghị enwe ike ịkpọ oku FaceTime.
Macs kwesịrị ijikọ na ịntanetị site na iji Wi-Fi ma ọ bụ hotspot mkpanaka iji mee oku FaceTime. Ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na ejikọtara Mac gị na ịntanetị, nke a bụ ihe ị ga-anwale:
Idozi Okwu Apple ID Na Mac
Akpa imeghe Chakwasa ihie site na ịpị akara ngosi iko na aka nri na ihuenyo aka nri. .Dị FaceTime ma pịa ugboro abụọ imeghe ya mgbe ọ pụtara na listi. Pịa imeghe FaceTime menu n'akụkụ aka ekpe aka ekpe nke ihuenyo wee pịa Mmasị…
Nke a window ga-egosi gị ma ọ bụrụ na ị na-banyere na gị Apple ID. Ọ bụrụ na ị banyeghị, banye na Apple ID gị wee nwaa oku ọzọ. Ọ bụrụ na ị banyela ma ị hụ Na-eche maka ọrụ, gbalịa ịbanye na azụ ọzọ - ọtụtụ oge, nke ahụ bụ ihe niile ọ ga - ewe iji dozie nsogbu a.
Gbaa mbọ hụ na edozi oge gị na oge gị
Ọzọ, ka anyị lelee ụbọchị na oge na Mac gị. Ọ bụrụ na edozighi ha nke ọma, oku FaceTime agaghị agabiga. Pịa na menu Apple n'aka aka ekpe nke ihuenyo ahụ, wee pịa Mmasị sistemụ . Pịa na &Bọchị & Oge wee pịa &Bọchị & Oge na elu-elu nke menu na-egosi. Gbaa mbọ hụ na Nịm akpaghị aka na-nyeere.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga-achọ pịa mkpọchi dị na ala aka ekpe nke ihuenyo ma banye na paswọọdụ kọmputa gị iji mee mgbanwe na ntọala a. Mgbe ị banyere, pịa igbe na-esote “Tọọ ụbọchị na oge na-akpaghị aka: iji gbanye ya. Mgbe ahụ họrọ obodo kacha nso n’obodo gị site na listi enyere ma mechie windo.
Emeela m ihe niile ma FaceTime ka na-anaghị arụ ọrụ! Kedu ihe m ga-eme?
Ọ bụrụ na FaceTime ka na-agaghị arụ ọrụ, lelee ntuziaka Payette Forward na ebe kachasị mma iji nweta nkwado maka iPhone gị na mpaghara yana n'ịntanetị maka ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi nweta enyemaka.
iphone 7 na -agbanyụ na enweghị usoro
Edozi Nsogbu FaceTime: Ihicha ya
E nwere ya! Olile anya, FaceTime na aru oru na iPhone, iPad, iPod, na Mac gi, gi na ndi ezinulo gi na ndi enyi gi na akparita uka. Oge ọzọ FaceTime anaghị arụ ọrụ, ị ga-ama otu esi edozi nsogbu ahụ. Enwere ike ịjụ anyị ajụjụ ọ bụla ọzọ n'okpuru ebe a!